Ilay ampondra nitafy hoditry ny liona - Takila Malagasy
Ilay ampondra nitafy hoditry ny liona (Dadan'i Aina)
Mpanoratra: Dadan'i Aina
Nitsidika : 1610
Sokajy: Angano, Biby
Nakàna hevitra avy amin'i La Fontaine sy angano Indiana
Taloha ela be tany hono dia mpinamana tsara ny ampondra sy ny liona. Niara-nisangy sy nifananihany. Nialona kely an'i Liona kosa anefa i Ampondra satria dia matahotra an'i Liona daholo ny biby rehetra, eny hatramin'ny olona. Nalaza ho masiaka mantsy ny liona. Ny Ampondra kosa dia mihomehy sy mampihomehy no ataony ka tsy nisy natahotra azy. Ny olona aza moa nikapoka azy mihitsy.
Indray andro ary dia niteny tamin'i Liona i Ampondra.
- Fa inona ho'aho ry Liona no tena mahatonga anao atahoran'ny biby rehetra?
- Ka tsy fantatrao angaha fa izaho no mpanjakan'ny biby? Hoy i Liona. Izao fiakanjoko sy fijoroko izao dia hahafantaran'ny biby rehetra aty anaty ala fa izaho no liona mahery miady sy haingam-pandeha indrindra.
Dia nieritreritra teo ny ampondra nitady izay hitovizana amin'i Liona. Ka hoy izy avy eo.
- Izaho re mba te ho tahaka anao atahoran'ny biby rehetra na dia fotoana fohy fotsiny aza. Koa mba azonao ampindramina ahy ary ve ny akanjonao?
Nisalasala kely i Liona fa avy eo nomeny ihany sady hoy izy:
- Tandremo ary fa mila entina am-pahamendrehana ity akanjo ity satria dia ho heverin'ny olona fa liona tokoa ianao.
Dia nomen'ny liona hotafian'ny ampondra hono ny akanjony ka lasa nivezivezy teny rehetra teny ny ampondra avy eo.
- Teny an-dalana dia nifanena tamin'ny fosa ny ampondra izay nitafy ilay akanjon'ny liona. Mbola vao lavitra anefa dia nampitahorin'ny ampondra ny fosa ka nirifatra nitsoaka.
- Enjehin'ny liona aho, enjehin'ny liona aho, hoy izy niantsoantso.
Te hihomehy mafy ny ampondra nahita izany fa notazominy ihany.
- Nandeha kelikely indray izy dia nahita bitro roa. Nitsambikina ny ampondra ka poa toa izay dia tafaporitsika nitsoaka lavitra koa ny bitro.
- Mihazakazaha aza mijanona mihitsy, hoy ilay bitro iray tamin'ito namany, fa enjehin'ny liona isika.
Dia nihazakaza mafy izy ireo. Fa ny ampondra kosa te hihomehy mafy nahita ireto fandosiny.
Nony tonga teo akaikin'ny rano, dia mba te hijery ny tandindony amin'ny rano ny ampondra. Nivoaka avy ao anefa ny voay saika hitanina andro ka nahita ny ampondra tampoka. Natahotra ny voay fa noheveriny fa ny liona ity nanatona azy ka niverin-dalana sy niditra lalina tany anaty rano indray izy. Saika toran'ny homehy indray ny ampondra nahita izany saingy mbola voatazony ihany ny fihomehezany.
Nony akaiky tanàna iray ary dia nifanena tamin'ny olombelona ny ampondra. Raiki-tahotra ilay olona tamin'ny voalohany ka saika handositra. Tsikariny tampoka anefa fa lava sofina ity liona nihaona taminy ka nanatonany moramora. Tsy liona ity, hoy izy anakam-po, saingy tsy fantatro fa aleo kitihako ny sofiny. Dia nokitikitihany teo ny sofin'ity ampondra ka latsaky ny fihomehezana izy.
- Hi-han! hi-han! hi-han! Hoy ilay ampondra nihomehy. Avelao ny sofiko fa izaho ampondra ihany re ity.
Tezitra ny olona ka nandray firitsoka hikapoka azy. Izy kosa nitsoaka mafy niverina nandeha tany amin'i liona.
- Andeha hateriko ity akanjo ity, hoy izy, fa sao hahitako loza fa efa fantatry ny olombelona hoe tsy Liona aho.
Nony tonga tao an-tranon'i Liona i Ampondra dia gaga nahita ireto biby sasany natahotra azy dia ny fosa, ny bitro ary ny voay. Etsy ampovoan-trano kosa ny Liona vinitra mafy.
- Tonga aty amiko ireto biby ireo, hoy ny liona, nitaraina tamin'ny nanaovanao azy. Nentinao nampitahorana azy ny akanjoko. Ary saika tsy nijanona angamba ianao raha tsy tratran'ny olombelona. Koa manomboka izao ianao raha mbola te ho biby ao anatin'ny fanjakako ihany dia tsy maintsy hanompo ny olombelona. Hokapohiny raha vao tsy miasa. Izany anefa dia ataonao anatin'ny fihomehezana hatrany.
Dia izany hono no mahatonga ny ampondra mahavita mitondra entana mavesatra be rehefa asain'ny olombelona miasa. Dia izany foana koa hono no mahatonga ny ampondra mihomehy manao hoe "Hi-han! Hi-han!" na dia efa reraka aza.